ကျော်လင်း (ကလေးအထူးကုဆရာဝန်) - ဝီကီပီးဒီးယား
ပါမောက္ခဒေါက်တာကျော်လင်းသည် မြန်မာ ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာ ကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး  ၂၂ ရက် မေလ ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် ဆေးပညာဘွဲ့ကို ဆေးတက္ကသိုလ် (၂) ရန်ကုန် မှ ကလေးကျန်းမာပညာဘာသာရပ်ဂုဏ်ထူးဖြင့် ရရှိခဲ့ပြီး Royal College of Paediatrics and Child Health, UK မှ MRCPCH (UK) ဘွဲ့နှင့် FRCPCH ဘွဲ့များကို ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်နှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တို့တွင် ရရှိခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး ကလေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောရောဂါအထူးကုဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်ကလေးဆေးရုံကြီး၊ ကလေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောရောဂါဌာနကို ဦးဆောင်တည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း၊ ကလေးကျန်းမာပညာအဖွဲ့၏ ၂၀၁၈-၂၀၂၂ သက်တမ်း ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်သည်။။
၃ ပါဝင်ရေးသားသော စာအုပ်များ
၄ ရရှိထားသော ဆုများ
အရှေ့တောင်အာရှ ဦးနှောက်ရောင်နာရောဂါစီမံကိန်း (South-east Asia Encephalitis Project) တွင် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ 
The International Child Neurology Association ၏ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပညာရေးအစည်းအဝေးကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင်းပနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ 
ကလေးဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောရောဂါဆိုင်ရာ သုတေသနစာတမ်းများပြုစုခဲ့ပြီး  စာတမ်းအချို့မှာ -
Updated guideline: paediatric emergency triage, assessment and treatment 
Bernard D’Souza international fellowship award (2011)
Outstanding Paediatrician 2016 ကလေးကျန်းမာပညာအဖွဲ့
ကလေးကျန်းမာရေးနှင့် ပက်သက်သော ပညာပေးရုပ်သံများကို ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ ရုပ်သံအများစုမှာ ကလေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောရောဂါများအကြောင်းဖြစ်ပြီး လူသိများသော အစီအစဉ်များအနက် အချို့မှာ -
ကလေးများ၏ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် မိဘတို့၏ အခန်းကဏ္ဍ 
ကလေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် ပက်သက်၍ တတ်ကျွမ်းသည့်ဆရာဝန်များနှင့် အမြန်ဆုံးပြသရမည့် အခြေအနေများ 
World Cerebral Day 2020" 
ကလေးတွေမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင် 
Autism ရောဂါအကြောင်း သိကောင်းစရာ 
Autism အကြောင်း သိကောင်းစရာများ 
စကားပြောနောက်ကျတဲ့ ကလေးနဲ့ ပက်သက်ပြီး မိဘများ သိသင့်သည်များ 
CP ရောဂါအကြောင်း သိကောင်းစရာများ 
ရေးသားခဲ့သော ကလေးကျန်းမာရေးပညာပေး ဆောင်းပါးအချို့မှာ -
တက်တတ်သော ကလေးများ (၁) 
↑ Kyaw Linn, FRCPCH
↑ Myanmar Pediatric Neurology[လင့်ခ်သေ]
↑ Pediatric Society Executive Committee (2016-2018)
↑ ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါကြောင့် သေဆုံးမှုလျော့ကျရေး စီမံချက်ဖြင့်ဆောင်ရွက်မည်၊ 7Day News ၂၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၅[လင့်ခ်သေ]
↑ ICNA Educational Meeting Myanmar 2016
↑ Kyaw Linn, Google Scholar access on 14 December 2020
↑ "Opsoclonus-myoclonus-ataxia syndrome associated with dengue virus infection" (2014). Parkinsonism & Related Disorders 20 (11): 1309-1310. doi:10.1016/j.parkreldis.2014.09.002.
↑ "HIV-Related Cognitive Impairment of Orphans in Myanmar With Vertically Transmitted HIV Taking Antiretroviral Therapy" (2015). Pediatric Neurology 53 (6): 485-490.e1. doi:10.1016/j.pediatrneurol.2015.08.004.
↑ "Opsoclonus-myoclonus-ataxia syndrome associated with dengue virus infection" (2015). Parkinsonism & Related Disorders 21 (2): 160-161. doi:10.1016/j.parkreldis.2014.11.009.
↑ Updated guideline: paediatric emergency triage, assessment and treatment (PDF)။ Geneva: World Health Organization။ 2016။ ISBN 9789241510219။
↑ Connections။ 24။ St. Paul: Child Neurology Society။ 2016။
↑ ကလေးများ၏ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် မိဘတို့၏ အခန်းကဏ္ဍ အပိုင်း ၁ at YouTube
↑ ကလေးများ၏ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် မိဘတို့၏ အခန်းကဏ္ဍ အပိုင်း ၂ at YouTube
↑ ကလေးများ၏ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် မိဘတို့၏ အခန်းကဏ္ဍ အပိုင်း ၄ at YouTube
↑ ကလေးများ၏ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် မိဘတို့၏ အခန်းကဏ္ဍ အပိုင်း ၅ at YouTube
↑ ကလေးများ၏ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် မိဘတို့၏ အခန်းကဏ္ဍ အပိုင်း ၆ at YouTube
↑ မေးလိုရာမေး ကလေးကျန်းမာရေး at YouTube
↑ ကလေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် ပက်သက်၍ တတ်ကျွမ်းသည့်ဆရာဝန်များနှင့် အမြန်ဆုံးပြသရမည့် အခြေအနေများ အပိုင်း ၁ at YouTube
↑ ကလေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် ပက်သက်၍ တတ်ကျွမ်းသည့်ဆရာဝန်များနှင့် အမြန်ဆုံးပြသရမည့် အခြေအနေများ အပိုင်း ၂ at YouTube
↑ ကလေးတွေမှာဖြစ်တတ်သော အတက်ရောဂါ at YouTube
↑ အတက်ရောဂါအကြောင်း အပိုင်း ၁ at YouTube
↑ အတက်ရောဂါအကြောင်း အပိုင်း ၂ at YouTube
↑ အတက်ရောဂါအကြောင်း အပိုင်း ၃ at YouTube
↑ အတက်ရောဂါနဲ့တူတဲ့ လက္ခဏာများ at YouTube
↑ World Cerebral Day 2020 at YouTube
↑ ကလေးတွေမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင် at YouTube
↑ Autism ရောဂါအကြောင်း သိကောင်းစရာ at YouTube
↑ Autism အကြောင်း သိကောင်းစရာများ အပိုင်း ၁ at YouTube
↑ Autism အကြောင်း သိကောင်းစရာများ အပိုင်း ၂ at YouTube
↑ Autism အကြောင်း သိကောင်းစရာများ အပိုင်း ၃ at YouTube
↑ အဖြစ်များတဲ့ ဦးနှောက်အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါများ at YouTube
↑ စကားပြောနောက်ကျတဲ့ ကလေးနဲ့ ပက်သက်ပြီး မိဘများ သိသင့်သည်များ at YouTube
↑ CP ရောဂါအကြောင်း သိကောင်းစရာများ at YouTube
↑ တက်တတ်သော ကလေးများ (၁)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကျော်လင်း_(ကလေးအထူးကုဆရာဝန်)&oldid=652688" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၄ ဧပြီ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၁၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။